बेलायतका प्रधानमन्त्रीका सम्बोधन शैली यस्तो छ , हामीले पनि केही सिक्ने कि ? - VOICE OF NEPAL
बेलायतका प्रधानमन्त्रीका सम्बोधन शैली यस्तो छ , हामीले पनि केही सिक्ने कि ?
२६ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०९:५३
488 ??? ???????
– नारायण गाउँले, बेलायत।
बेलायतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढोका सुनसान सड़कमा खुल्छ । कुनै ठूलो घोषणा या सूचना दिनुपर्यो भने ढोकाअगाडि सड़कमैं एउटा सामान्य काठको रोष्ट्रम राखिन्छ । त्यसवरपर पत्रकारसहित केही दर्जन मान्छे जम्मा हुन्छन् । ढोका खोलेर प्रधानमन्त्री बाहिर आउँछन्, रोष्ट्रममा उभिन्छन् र पाँचदेखि १० मिनेट बोल्छन्, धन्यवाद दिएर भित्र पस्छन् । समारोह सकियो ।
न पोस्टर, न ब्यानर, न तड़कभड़क, न विज्ञापन, न भोजभतेर ! न उद्घोषकको भूमिका, न चर्को भाषण । देश अझै पनि शक्तिशाली छ, समृद्ध छ र निर्णय पनि ठूलै हुन्छन् । तर, कहिल्यै जनताको करबाट उठ्ने राजश्व खर्चेर प्रधानमन्त्रीको फोटो सड़क-सड़क र पोल-पोलमा झुन्ड्याएको देखिन्न ।
नयाँ युग सुरु भयो, बेरोजगारी सकियो, यो भयो, त्यो भयो भनेर हावामा ठूला ठूला गफ गरेको सुन्न पनि पाइन्न । न देशभर पत्रिका रङ्ग्याउने काम हुन्छ । ती साह्रै साना तर नागरिकको जीवनसँग जोड़िएका योजनाबारे बोल्छन्, तथ्य पस्किन्छन्, र आफू त्यसमा सफल या असफल भएको इमान्दारीपूर्वक स्वीकार गर्छन् । खासमा एक सुका पैसा पनि जनताको करबाट फजूल खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने तिनलाई थाहा छ । संसदभित्र चर्को बहस हुन्छ तर त्यो रोष्ट्रममा उभिएर कहिल्यै विपक्षीलाई या जनतालाई होच्याउने गरी भाषण गरेको पनि सुनिएको छैन । आखिर प्रधानमन्त्री सबैको हो र सबैलाई आफ्नो देख्नु उसको दायित्व हो । आफ्ना पक्षका मात्रै नागरिकले कर तिर्ने होइन ।
खास मुद्दा, एजेन्डा या कामबिनै हाम्रा प्रम लामो र खर्चिलो युरोप यात्राको क्रममा बेलायत आउँदै हुनुहुन्छ । अस्ति भर्खर उहाँ जम्बो टोलीसहित प्रयोजनहीन क्याम्बोडिया भ्रमणबाट फर्किनुभएको थियो । हाम्रा मन्त्री जति त प्रायः सबै बाहिरै हुन्छन् । राजदूत त कूटनैतिक काममा भन्दा हरेक हप्ता नेता या मन्त्रीलाई लिन एअरपोर्ट धाउनै व्यस्त हुन्छन् । शायद त्यसैले होला, कूटनीतिज्ञभन्दा सवारीविज्ञलाई छानेर राजदूत बनाइन्छ । उहाँ उड्ने बेलासम्म पनि कहाँ कसलाई किन भेट्ने भन्ने तय नभई सकेको खबर पढ़ियो ।
बेलायत भर्खर ‘आस्टेरिटी’बाट मुक्त हुँदै छ । देशको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएर एकाउन्ट ब्यालेन्स बिग्रिएपछि विगतका सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, ऋण घटाउने, तलब वृद्धिमा रोक लगाउने, ब्याज घटाउने र लगानीका निम्ति प्रेरित गर्ने र सामाजिक भत्ताहरू कटौती गर्ने काम गरेको थियो । अहिले यो ब्यालेन्स पोजेटिभ भएको छ । र पनि कुनै विज्ञापन या पोस्टरिङ् छैन । नेपालको हाल त राजश्वले तलबभत्तासम्म नधान्ने छ ।
यहाँ आएको बेला प्रधानमन्त्रीले भाषण, प्रचार, तड़कभड़क र गाली गर्ने होइन, काम गर्ने हो भन्ने उहाँले शिक्षा लिनुहोला भन्ने आशा छ । अनि जति स्रोत छ र जे गर्न सकिन्छ त्यतिमात्रै बोल्ने शिक्षा लिएर फर्किनुभो भने अलिकति खर्च उठ्थ्यो कि ?